STEP Democracy News
YCDC Election Framework Workshop
STEP Democracy in cooperation with CSOs' Coalition on Municipal Laws, Bylaws and Policies hostedastakeholder consultation workshop on the Election Framework on 14-15 August. Read More
STEP Democracy is back!
The EU funded STEP Democracy programme began its second phase on August 1st 2018 and the team is excited for the opportunity to continue its support to Myanmar’s democratic transition over the next forty months.	Read More
BREAKTHROUGH WITH THE YANGON CITY DEVELOPMENT COMMITTEE
While Myanmar has held successful national elections in 2015 and 2017, municipal elections lag far behind. For example, the city of Yangon has yet to hold fully democratic elections and its electoral legal framework has not been updated since the colonial period. In this context, the workshop and drafting session on municipal electoral reform (26-27 October) held by STEP Democracy partner International IDEA as part of the EU-funded STEP Democracy project, representsalandmark in municipal electoral reform.	Read More
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်နှင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တို့တွင် အမျိုးသားအဆင့်ရွေးကောက်ပွဲများကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးဖြစ်သော်လည်း စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲမှာမူ နောက်ကျကျန်ရစ်လျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ဒီမိုကရေစီကျသောရွေးကောက်ပွဲများအားကျင်းပရမည်ဖြစ်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေမူဘောင်မှာ ကိုလိုခေတ်ကာလမှစကာ ခေတ်နှင့်အညီမွမ်းမံခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ။ သို့ဖြစ်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ထောက်ပံ့မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ရှေ့သို့မြန်မာအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် International IDEA သည် ရှေ့သို့မြန်မာအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် မူကြမ်းရေးဆွဲသည့်အခမ်းအနားအား အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နှင့် ၂၇ ရက်တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာ စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် မှတ်တိုင်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။	Read More
ဥရောပသမဂ္ဂ၏အထောက်အပံ့ဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ရှေ့သို့မြန်မာအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော DIPD ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သောမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၏စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲများ သို့မဟုတ် KV 17 အား ကြည့်ရှုလေ့လာရန်၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွင် ဒေသတွင်းဒီမိုကရေစီစနစ်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုအနီးကပ်လေ့လာရန်တို့အတွက် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသို့လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။	Read More
Peer engagement and collaborative knowledge-sharing can help stakeholders garner novel insights on familiar topics. As part of the European Union-funded STEP Democracy Programme,aDIPD-sponsored delegation of Myanmar political party members, election commission representatives, and Yangon regional government officials visited Denmark onastudy tour to observe the Danish municipal elections (KV17) on 21 November and observe first hand how local democracy functions in Denmark. Read More
MYANMAR EGRESS မှ အကြီးတန်းသင်တန်းဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုဇေယျာလင်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
“အချို့ဒေသတွေမှာ သင်တန်းတက်ရောက်သူတွေက အခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြုလုပ်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်တုန်းကရခဲ့တဲ့ အနုတ်သဘောဆောင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့် သင်တန်းတက်ရမှာကို တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ကြတယ်"	Read More